SFP Transceiver Module Vagadziri & Vatengesi | China SFP Transceiver Module Fekitori
OPS551X83CDL40 10G SFP + ma transceivers akagadzirirwa 10G Ethernet 10G BASE-ER / EW pa 802.3ae, uye inogona kutsigira data-rate kubva 1.25Gb / s kusvika 11.1Gb / s. Dhijital diagnostics inowanikwa kuburikidza neI2C interface sezvakatsanangurwa muSFP + MSA . Zvimiro 1. 10Gb / s serial optical interface inoenderana ne802.3ae 10GBASE-ER / EW 2. Yemagetsi interface inoenderana neSFF-8431kutsanangurwa kwekusimudzirwa 8.5 uye 10 Gigabit diki fomu chinhu chinokwaniswa module "SFP +" 3. 2-w ...
OPSP311X3CDL10 maTransceivers akagadzirirwa 10Gb / s serial optical interfaces ekutaurirana kwedata neiyo imwe mode fiber (SMF). Iyo transceiver inogona kutsigira 9.953- 11.1Gb / s. Iwo ma transceiver dhizaini akagadziridzwa epamusoro kuita uye mutengo unoshanda kupa vatengi mhinduro dzakanakisa dze datacom. Zvimiro 1. Inopisa pluggable 2. 10Gb / s serial optical interface 3. Kusvika ku10km chinhambwe 4. Inoenderana neSFP + MSA 5. SFP MSA package ine duplex LC connector 6. Dhijitori Yekuongorora Mo ...
10Gb / s Pfupi-Wavelength Inogadziriswa SFP Transceiver OPSP851X3CDLM
OPSP311X3CDL10 maTransceivers akagadzirirwa 10Gb / s serial optical interfaces ekutaurirana kwedata neiyo imwe mode fiber (SMF). Iyo transceiver inogona kutsigira 9.953- 11.1Gb / s. Iwo ma transceiver dhizaini akagadziridzwa epamusoro kuita uye mutengo unoshanda kupa vatengi mhinduro dzakanakisa dze datacom. Zvimiro ● Hot pluggable ● 10Gb / s serial optical interface ● Kusvika ku10km chinhambwe ● Inoenderana neSFP + MSA ● SFP MSA package ine duplex LC connector ● Dhijitori Yekuongorora Monitor ...
OPSP551X3CDL80 10G SFP + ma transceivers akagadzirirwa 10G Ethernet 10G BASE-ZR / ZW pa802.3ae, uye inogona kutsigira data-rate kubva 1.25Gb / s kusvika 11.1Gb / s. Dhijital diagnostics anowanikwa kuburikidza neI2C interface sezvakatsanangurwa muSFP + MSA . Zvimiro ● 10Gb / s serial optical interface inoenderana ne802.3ae 10GBASE-ZR / ZW ● Yemagetsi interface inoenderana neSFF-8431kutsanangurwa kwekusimudzirwa 8.5 uye 10 Gigabit diki fomu chinhu chinokwaniswa module "SFP +" ● 2-waya ...
OPSPB321X3CDL10 maTransceivers akagadzirirwa 10Gb / s serial optical interfaces ekutaurirana kwedata neiyo imwe mode fiber (SMF). Iyo transceiver inogona kutsigira 9.953- 11.1Gb / s. Iwo ma transceiver dhizaini akagadziridzwa epamusoro kuita uye mutengo unoshanda kupa vatengi mhinduro dzakanakisa dze datacom. Zvimiro ● Inopisa pluggable ● 10Gb / s serial optical interface ● Inosvika 80km chinhambwe ● Inoenderana neSFP MSA ● SFP MSA package ine duplex LC connector ● Dhijitori Yekuongorora Monit ...
OPXP551X3CDL40 10G 1550nm XFP transceivers akagadzirirwa 10G Ethernet 10G BASE-ER / EW pa 802.3ae uye 10G SONET OC-192 / SDH STM-64, uye inogona kutsigira data-chiyero kubva pa9 .953Gb / s kusvika 11.1Gb / s. Dhijitari yekuongorora inowanikwa kuburikidza neI2C interface sezvakatsanangurwa muXFP MSA. Iwo maTransceiver dhizaini akagadziridzwa ekuita kwepamusoro uye mutengo unoshanda kupa vatengi mhinduro dzakanakisa dzedhisacom uye telecom kunyorera. Zvimiro ● Inopisa pluggable ● Tsigira 9.95Gb / s kusvika 11.1Gb / s bit rates ● Bel ...
OPXP311X3CDL10 10G 1310nm XFP transceivers akagadzirirwa 10G Ethernet 10G BASE-LR / LW pa 802.3ae uye 10G SOI OC-192 / SDH STM-64, uye inogona kutsigira data-chiyero kubva pa9 .953Gb / s kusvika 11.1Gb / s. diagnostics inowanikwa kuburikidza neI2C interface sezvakatsanangurwa muXFP MSA. Iwo maTransceiver dhizaini akagadziridzwa ekuita kwepamusoro uye mutengo unoshanda kupa vatengi mhinduro dzakanakisa dzedhisacom uye telecom kunyorera. Zvimiro ● Inopisa pluggable ● Tsigira 9.95Gb / s kusvika 11.1Gb / s mitengo zvishoma ● Pazasi ...
10Gb / s 850nm Multi-chiyero XFP Optical Transceivers OPXP851X3CDLM
OPXP851X3CDLM 10G 850nm XFP transceivers akagadzirirwa 10G Ethernet 10G BASE-SR / SW pa 802.3ae, uye inogona kutsigira data-rate kubva pa9. Iyo transceiver dhizaini yakagadziridzwa yeakakwira mashandiro uye mutengo unoshanda kupa vatengi mhinduro dzakanakisa dze datacom uye telecom kunyorera. Zvimiro ● Hot pluggable ● Tsigira 9.95Gb / s kusvika 11.1Gb / s bit rates ● Pazasi pe2.5W simba rekushandisa ● XFP MSA ...
OPXP551X3CDL80 10G 1550nm XFP transceivers akagadzirirwa 10G Ethernet 10G BASE-ZR / ZW pa 802.3ae uye 10G SONET OC-192 / SDH STM-64, uye inogona kutsigira data-chiyero kubva 9.953Gb / s kusvika 11.1Gb / s. diagnostics inowanikwa kuburikidza neI2C interface sezvakatsanangurwa muXFP MSA. Iwo maTransceiver dhizaini akagadziridzwa ekuita kwepamusoro uye mutengo unoshanda kupa vatengi mhinduro dzakanakisa dzedhisacom uye telecom kunyorera. Zvimiro ● Inopisa pluggable ● Tsigira 9.95Gb / s kusvika 11.1Gb / s zvishoma mitengo ● Iva ...
10Gb / s Bidi Multi-chiyero XFP Optical Transceivers OPXPB321X3CDL10
OPXPB321X3CDL10 10G XFP BIDI transceivers akagadzirirwa 10G Ethernet 10G BASE-LR / LW pa 802.3ae uye 10G SOI OC-192 / SDH STM-64, uye inogona kutsigira data-chiyero kubva pa9 .953Gb / s kusvika 11.1Gb / s. Dhijitari yekuongorora inowanikwa kuburikidza neI2C interface sezvakatsanangurwa muXFP MSA. Iwo maTransceiver dhizaini akagadziridzwa ekuita kwepamusoro uye mutengo unoshanda kupa vatengi mhinduro dzakanakisa dzedhisacom uye telecom kunyorera. Zvimiro ● Inopisa pluggable ● Tsigira 9.95Gb / s kusvika 11.1Gb / s mitengo zvishoma ● Pazasi ...
10Gb / s Bidi Multi-chiyero XFP Optical Transceivers OPXPB231X3CDL10
OPXPB231X3CDL10 10G XFP BIDI transceivers akagadzirirwa 10G Ethernet 10G BASE-LR / LW pa 802.3ae uye 10G SOI OC-192 / SDH STM-64, uye inogona kutsigira data-chiyero kubva pa9 .953Gb / s kusvika 11.1Gb / s. diagnostics inowanikwa kuburikidza neI2C interface sezvakatsanangurwa muXFP MSA. Iwo maTransceiver dhizaini akagadziridzwa ekuita kwepamusoro uye mutengo unoshanda kupa vatengi mhinduro dzakanakisa dzedhisacom uye telecom kunyorera. Zvimiro ● Inopisa pluggable ● Tsigira 9.95Gb / s kusvika 11.1Gb / s mitengo zvishoma ● Pazasi ...